Health Fix by popolay.com
The symptom that you think, …justalittle... it maybe hurts your health!! “Health Fix” Health Guide for everyone in the family, that can make you understand all about health and turn to take care each other, more and more. Present byasituation and female presenter who will bring you to ask the doctor all questions. Is your health still ok ?? Let’s check up together... in ... “Health Fix”
30 พ.ค. 2562 | 2,615 Views
21 May 2019 | 6,475 views “No Bra Day” ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လှုံဆော်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်တော့ အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဘရာစီယာ မဝတ်ဘူးဆိုရင် မည်မျှပင်သေးငယ်တဲ့ ရင်းသားဖြစ်စေကာမူ ကျန်းမာရေးအရ အမျိုးသမီးတွေမှာ အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက အထောက်အထားတွေနဲ
16 May 2019 | 5,021 views ဒူးရင်းသီး ရာသီဖြစ်လို့ ဒူးရင်းသီးကြိုက်သူ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအတွက်တော့ ချဉ်ခြင်းတက်တယ်ဆိုပြီး အားရပါးရစားဖို့ အခွင့်အရေးကောင်း တစ်ခုပါပဲ။ အသီးမှာ ဘုရင်လို့ တင်စားထားလောက်တဲ့ ဒူးရင်းသီးမှာ အဟာရဓာတ်တွေ များပြားစွာပါဝင်တာ မှန်သော်လည်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားချိန်မှာ
13 May 2019 | 7,010 views ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်လေးတွေဆိုတာ ကလေးတစ်ပိုင်း၊ လူကြီးတစ်ပိုင်း အရွယ်လေးတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ သင့်ကို လိုအပ်နေသေးသလို တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လဲ လူကြီးဖြစ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်ကိုမလိုအပ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီလို အရွယ်လေးတွေဟာ အများဆုံး မိဘနဲ့ ရန်
၂ လအတွင်း သဘာဝအတိုင်း သွားပြန်ပေါက်နိုင်မည့်နည်းလမ်း တွေ့ရှိ
13 May 2019 | 12,894 views အရွယ်ရောက်ပြီးသား လူတွေအတွက် သွားကျိုးတဲ့အခါ ကလေးတွေလို သွားပြန်ပေါက်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့်မို့ သွားအတုစိုက်တာ၊ အံကပ်လုပ်တာတွေနဲ့ အစားထိုးကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သွားအစစ်လိုမျိုး အဆင်မပြေတာ၊ နာကျင်တာ၊ သက်တမ်းမပြည့်ခင် ပြန်ကျွတ်ထွက်တာတွေနဲ့ ရင်ဆို
19 Jun 2019 | 1,820 Views
19 Jun 2019 | 245 Views
19 Jun 2019 | 639 Views
19 Jun 2019 | 248 Views
19 Jun 2019 | 265 Views
စိတ်ပင်ပန်၊လူပင်ပန်းဖြစ်နေရင် လုပ်သင့်တဲ့ အချက်(၄)ချက်
09 May 2019 | 6,393 views လူတစ်ယောက်မှာ ပင်ပန်းတယ်ဆိုတာက နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုက ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့် ပင်ပန်းတာဖြစ်ပြီး ဒုတိယကတော့ စိတ်အားဖြင့် ပင်ပန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ခန္ဓာအားအင် ချိနဲ့လာပြီး နေမကောင်းဖြစ်လာတဲ့အခါ စိတ်ဟာအလိုလိုသိမ်ငယ်လာတတ်သလို၊ ဝမ်းနည်းအာ
သွေးတိုးလာရင် ၁ မိနစ်အတွင်း အမြန်ဆုံး သက်သာစေမည့် နည်းလမ်း
08 May 2019 | 52,062 views သွေးတိုးရောဂါ ရှိတဲ့သူတွေဟာ သွေးတိုးတဲ့ဝေဒနာကို အချိန်နေရာမရွေး ခံစားရတတ်ပါတယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ရုတ်တရက် သွေးတိုးလာပြီး သောက်နေကျဆေးလည်း အနားမှာမရှိ၊ ကုသမှုခံယူဖို့လည်း မလွယ်ကူတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ သွေးတိုးဝေဒနာကို တစ်မိနစ်အတွင်း သက်သာပျောက်ကင်းစေမယ့်
06 May 2019 | 7,434 views ဂျပန်အမျိုးသမီးတွေဟာ ဘယ်အသက်အရွယ်ပဲ ရောက်ရောက် အများအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ် သွယ်လျပြီး ရုပ်ရည်လေးတွေက အရွယ်တင်နုပျိုနေတာကို သတိထားမိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာ အလှအပနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဂျပန်ရိုးရာ ရှေးဟောင်းလျှိုဝှက်ချက် တစ်ခုခုရှိလိမ့်မယ်လို့ ထင်
ဝက်ခြံကင်းစင်ဖို့ မဖြစ်မနေ ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့ အစားအစာများ
03 May 2019 | 35,100 views လေထုညစ်ညမ်းလာတဲ့ ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ လူတော်တော်များများ မျက်နှာမှာ ဝက်ခြံဖုလေးတွေ ထွက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲတဲ့အခါ ဝက်ခြံထွက်တာ အများဆုံးပါပဲ။ ဝက်ခြံကတော့ လူတိုင်းလိုလို ထွက်လေ့ရှိတယ်လို့ပြောရမှာပါပဲ နည်းနည်းထွက်တာနဲ့
၃ ပတ်အတွင်း သွေးတိုးရောဂါ အရှင်းပျောက်စေမည့် လေးညှင်းပွင့်ရဲ့အစွမ်း
02 May 2019 | 11,396 views အခုခေတ်မှာ လူကြီးလူငယ်မရွေးခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ရောဂါက သွေးတိုးရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါဟာ စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ အဓိကဆက်စပ်ပြီး အဲဒီကနေတစ်ဆင့် နှလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ရောဂါတွေပါဖြစ်ပွားတတ်ပြီး သတိမထားရင် အသက်သေဆုံးနိုင်တဲ့ထိ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ရောဂါတစ်ခု
ထမင်းများများစားခြင်းက ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ
02 May 2019 | 19,797 views သုတေသီများ၏ နောက်ဆုံးလေ့လာတွေ့ရှိချက် အသစ်အရ ထမင်းများများ စားခြင်းက အဝလွန်ရောဂါကို တားဆီးနိုင်ပြီး ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရာမှာ ထိရောက်စေကြောင်း သိရှိရသည်။
ข่าวทั้งหมด 509 ข่าว 43 หน้า